Video:- jaaliyada Soomaaliyeed Ee Minnesota Oo Ciidamada Xooga dalka Dhaqaale ubalan qaaday
kulan dhaqaale loogu uruurinayay Ciidamada xooga dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay Magaalada Minneapolis, ee Gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
kulankan ayaa ujeedadiisa ahayd in lagu dhiiri-galiyo laguna Taakuleeyo Ciidamada Xoogga dalka Somalia (Somali National Army, waxaana munaasibada ka soo qaybgalay Xog-hayaha Gudiga difaaca Gollaha Shacabka Soomaaliya Mudane Xildhibaan Saadiq Warfaa, Duuliye Sare Asli Hassan Cabaade oo ahayd Gabadhii ugu horraysay Africa oo Pilot noqota 1976 waxayna aad ugu dheeratay taariikhda Ciidanka cirka & sharaftii uu lahaa.
Read more about Video:- jaaliyada Soomaaliyeed Ee Minnesota Oo Ciidamada Xooga dalka Dhaqaale ubalan qaaday
Alle naxariistii Jano haka waraabiyee waxaa saaka Bosaso ku geeriyooday Boqor Xildhibaan Cumar Ismaaciil Maxamed ( Sanweyne ).
Read more about Xildhibaan hore Cumar Ismaaciil Maxamed ( Sanweyne ) oo saaka ku geeriyooday Bosaso
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr: Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa Tacsi u diray dhammaan Shacabka Puntland, Qoyska iyo Eheladii Allaah ha’u naxariistee Marxuun Boqor Xildhibaan Cumar Ismaaciil Maxamed ( Sanweyne ) oo ku geeriyooday Boosaaso saaka aroortii, Marxuun Boqor Xildhibaan Cumar Ismaaciil Maxamed ayaa ka mid ahaa xildhibaanadii lagu Aasaasay Puntland, isla markaana ka mid ahaa hoggaanka dhaqanka Puntland
Read more about Madaxweyne Gaas oo ka tacsiyeeyay geeridii ku timid allaha unaxariistee Boqor Xildhibaan Cumar Ismaaciil Maxamed ( Sanweyne )
Madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo kadib safar shaqo oo uu ku tagay magaalada Nayrobi ee caasimada kenya ayaa ka warbixiyay safarkiisa uu kutagay dalkaai iyo waxa uu daaranaa.
Axmwd Madoobe ayaa sheegay in uu ka qayb galay kuln lagu dhex dhaxaadinayay dowladda Itoobiya iyo Ururka ONLF oo uu sheegay in ay guul ku soo dhamaatay.
Read more about (Dhagayso) Madaxweyne Axmed Madoobe Muxuu kayiri Wadahadalada ONLF & Itoobiya?
Suuqa wayne ee Bakaaraha ayaa xiran maalintii labaad kadib markii ay ganacsatada suuqa ay ka gadoodeen canshuur gaaraysa boqol kiiba shan oo ay wasaarada maaliyada ku kordhisay.
Gudoomiyaha gobolka banaadir Injineer C/raxmaan Yariiso oo kulan laqaatay gudiga ganacsatada ayaa sheegay in laxalin doono tabashada ganacsatada, balse ganacsatada looga baahanyahay in ay layimaadaan wax macquul ah oo ay madaxda ka saraysa hor dhigaan.
Read more about (Dhagayso) Ganacsigii Suuqa Bakaaraha Oo maalintii labad Xiran Maamulka G/banaadir iyo Ganacsatada Oo markale shir ku balamay
(Dhagayso) Ganacsigii Suuqa Bakaaraha Oo maalintii labad Xiran iyo Maamulka G/banaadir iyo Ganacsatada Oo markale shir ku balamay
Read more about (Dhagayso) Ganacsigii Suuqa Bakaaraha Oo maalintii labad Xiran iyo Maamulka G/banaadir iyo Ganacsatada Oo markale shir ku balamay
(Dhagayso) Maxaa looga Hadlay kulankii ay wada qaateen Gudiga Nabadgalyada Gobolka Mudug iyo Bulshada ku dhaqan Deegaanada Godod iyo Gacmo Fale?
Gudigii Nabadaynta magaalada Gaalkacyo ee ka koobnaa Dowladda Fadaraalka Soomaaliya ,maamulada Puntland iyo Galmudug iyo Nabadoonada gobolka ayaa kulan ku saabsan adkeenta Nabad galyada iyo wada noolaanshaha bushada ku qabtay deegaano ay ka mid yihiin Godod ,Gacmo fale Jiingada iyo Jeexdin oo katirsan dhamaantod Gobolka Mudug .
Gudiga ayaa kulamo laqatay bulshada qaybaheeda kala duwan , Nabadoonada iyo waxgaradka deegaanadaasi waxayna kawada hadleen xoojinta Nabad galyada.
Gudiga ayaa sidookale lakulmay Saraakiisha ciidamada hogaaminaysay iyo Gudoomiye yaasha degmooyinka.
Read more about (Dhagayso) Maxaa looga Hadlay kulankii ay wada qaateen Gudiga Nabadgalyada Gobolka Mudug iyo Bulshada ku dhaqan Deegaanada Godod iyo Gacmo Fale?
Jaamac Maxamed Maxamud Ciise ayaa ka hirgaliyay suuq wareega oo gadaya miraha dhirta kabaxa sida hohobta,Dhafaruurta,Gumashaaga iyo xabagta cadaada.
Read more about Maqaayad miraha geedaha lagu gado oo Garowe ku taalla
Muxumed Xassan Muumin oo Dhukoow loo yaqaano waa sagaashan jir. Waxuu guursaday 11 haween balse hada waxay wada joogaan afar xaas.
Read more about Sagaashan jir ka warramayo jacaylka uu u qabo xaasaskiisa
Waxaa Muqdisho dhowaan la keenay dhalinyaro Soomaali ah oo laga soo daayay xabsiyada dalka Liibiya, dowladda Soomaliya ayaana hada gudi u saartay howsha.
Read more about Maxaabiis Soomaali ah oo Liibiya laga soo daynayo